Cutter Dredge waxaa loo adeegsaday Difaaca Badda Keta ee Gaana - Ellicott Dredges
Harooyinka Harooyinka Weyn & Dock waxay adeegsadaan Ellicott® Brand Cutter Dredge ee difaaca Keta ee Ghana, Afrika
18 inch (457 mm) Ellicott®brand cutter nuuga dredge "Alabama" ayaa bilaabay howlihii Mashruuca Difaaca Badda ee Keta
Source: Daboolka Sheekada Macdanta & Dhisidda Daadinta Adduunka
18 inji (457 mm) sumadda Ellicott® jeex jeex jeexan "Alabama" waxay bilaabaysaa hawlgallada Mashruuca Difaaca Badda ee Keta
Keta Lagoon waa biyo fara badan oo ka kooban biyaha cusbada ee Gacanka Guinea dhul cidhiidhi ah. Kani waxa uu la kulmayaa nabaad guur ba'an oo joogto ah. Qeyb badan oo ka mid ah kaabayaasha guryaha iyo dadweynaha ee tuulada Keta, oo ay ku jiraan wadada isku xirta deriskeeda waqooyiga, ayaa ku lumay badda. Baaxada dhulka udhaxeeya Keta iyo Kedzie ayaa hoos udhacaya qiimahooduna yahay 4.0 ilaa 8.0 m / sanadkii iminkana meelaha qaar ayuu kayaryahay 50 m. Haddii jasiiradda dhinaceeda la jebiyo, isbeddelada waxyeellada leh ee cusbada iyo qulqulka qulqulatada ayaa dhici doonta, iyadoo ay u badan tahay cawaaqib-xumo ba'an oo xagga beeraha maxalliga ah, warshadaha kalluumeysiga, ganacsiga, iyo xaaladaha maalinlaha ah ee kuwa ku nool Keta , Vodza, Kedzie, iyo nawaaxigeeda. Isla ujeeddadaas, haddii Webiga weyn ee Volta uu bararo xilliyada roobka, daadadku waxay sidoo kale u soo diri karaan hanjabaado culus oo ku wajahan sharafta deegaanka biyo-macaan ee jilicsan. Qeybta Avu-Keta waxay ku nooshahay xeebta: ilaalinteedu waa talaabada ugu horeysa ee muhiimka ah ee dib u soo celinta horumarka dhaqan-dhaqaale ee deegaanka. Wasaaradda Shaqada iyo Guriyeynta ee Jamhuuriyadda Gaana waxay dooneysay inay saameyn ku yeelato badbaadintan iyadoo la ilaalinayo lana dejinayo xeebta laga soo bilaabo Keta ilaa Hlorve, iyadoo la hirgelinayo mashruuc furaha furaha ah si loo qorsheeyo loona dhiso hagaajinta loo baahan yahay. Ujeeddooyinka barnaamijku waa in laga hortago nabaad-guurka xeebta ee xilli-xilliyeedka iyo daadadka, dib-u-soo-celinta dhulka qashin-qubka si loo ballaariyo magaalooyinka iyo tuulooyinka, iyo isku xidhka Keta ilaa Hlorve oo waddo dhererkeedu yahay 8.3-km. Si loo gaadho xalka ugu habboon ee Harooyinka Waawayn waxay sameeyeen daraasado iyo tijaabooyin taxane ah, kuwaas oo lagu quudiyay qorshaha guud si loo soo saaro qarash wax ku ool ah, xalal deegaan ahaan u habboon. Nidaamka xulashada waxaa loo tixgeliyey natiijooyinka imtixaannada xisaabta iyo haydarooliga, waxtarka qaabdhismeedka, adkeysiga, dayactirka, dabacsanaanta, iyo arrimaha deegaanka, bey'ada iyo arrimaha bulshada. Daraasadahaas waxaa fuliyay Harooyinka Waaweyn iyo qandaraaslalalalayaashiisa Baird & Associates iyo Qorshaynta Cilmi baarista & Horumarinta. Mashruuca Difaaca Badda ee Keta wuxuu leeyahay afar naqshad / dhisid qaybo:
Dhismaha Wadada 8.3-km / Wadada isku xirta Keta iyo Hlorve, dib u dhiska isku xirka burburka burburka. Difaaca Badda wuxuu ka shaqeeyaa sidii loo xaddidi lahaa nabaad-guurka kale isagoo ku xasilinaya xeebta hal webi oo ku teedsan iyo toddobo geed-hoosaad, nafaqo ku habboon xeebta iyo nafaqada nafaqada leh ee la dhigo inta u dhexeysa Keta ilaa Hlorve. Dhisme qaab-dhismeedka xakamaynta daadadka si loogu siiyo dadka deggan hareeraha lagoonka ka soo kabashada xaaladaha fatahaadda ba'an. Dib u soo celinta dhulka laga soo bilaabo lagoon aagga Keta, Vodza, iyo Kedzi, iyada oo la siinayo aagag ay ku dhisi karaan guryo iyo ganacsi.
Mashruucu wuxuu dhiirrigelinayaa ilaalinta bay'adda iyadoo loo marayo adeegsi waara isla markaana kobcinaya is-dhexgalka dhaqan-dhaqaale iyo koritaanka. Tusaale ahaan, waxaa la soo kordhin doonaa dhul beereed, waddo / jidwayduna waxay bixisaa oo dib u furaysaa wadadii loo mari lahaa taraafikada Togo iyo xeebaha Ghanian ee xeebta, tuulooyinka iyo tuulooyinka, iyadoo la siinayo beeralleyda iyo ganacsiyada kale ee aagga helitaanka suuqyada. Xeebaha cusub iyo dhulalka burburay ee qulqulaya ayaa abuuri doona goobo la ilaaliyo oo ay kalluumeysatadu ku bilaabi karaan doonnidooda, isla markaana siin doonaan hoy aamin ah warshadaha kalluumaysiga xeebta-ku-saleysan. Gargaarka fatahaada wuxuu yareyn doonaa qasaaraha soo gaarey beeralleyda daadka laamiga, iyo dhulka la soo cesho wuxuu siin doonaa aagag cusub abuuritaanka guryo, ganacsi, iyo bulshooyin.
Ugu dambeyntiina, Mashruuca Difaaca Badda Keta wuxuu keenayaa joogitaan ganacsi oo waxtar leh oo Mareykan ah dhaqaalaha Galbeedka Afrika, isaga oo dhalinaya iibsashada alaabada iyo adeegyada Mareykanka gebi ahaanba ka badan US $ 75,000,000. Harooyinka waaweyn waxay gacan ka geysteen diyaarinta maalgelinta mashruuca Bangiga Mareykanka Eximbank.
Shaqada Daadinta & Qodashada Waxay Bilaabeen Difaaca Badda Keta
18 inch (457 mm) cutter nuugista (CS) dredge "Alabama", oo ay dhistay Ellicott® International, ayaa bilaabay howlihii Mashruuca Difaaca Badda ee Keta 30-kii May 2000, iyadoo laga sifeynayo waxyaabo jilicsan oo aan munaasib ahayn oo dul maraya mustaqbalka amaahda ciidda iyo sii deynta si loo abuuro jasiirad u dhow degaannada shimbiraha. Harooyinka waawayn waxay dib-u-habayn ku sameeyeen "Alabama" iyada oo barroosimooyin cusub laga helay Ellicott® International si loo wanaajiyo waxtarka hawlgalka. Marka la gooyo aag ku filan oo ka mid ah goobta amaahda, "Alabama" ayaa bilaabi doonta bamgareynta buuxinta wadada isku xirta wadada weyn. Abaabulka qalabka madaniga ah ee culus iyo xirmada dhagaxa ayaa sii socota, iyada oo shixnaddii ugu dambeysay ay ka dhoofayso Mareykanka 21-kii Juun. Kaamkii la degi jiray ee Weta waa la dhammaystiray oo waa la degay, oo ay weheliyaan xafiisyada goobta ee soo degidda badda iyo xafiiska iyo tas-hiilaadka dayactirka ee kaawada laga qodo. . Hawlaha soo socda ayaa socda:
Abaabulidda 24 inch (610 mm) CS dredge "Utah" oo ku taal Shiinaha Shiinaha quusin Sha He Kou; Gaadiidka laga soo qaado Houston iyo Newark; Gaadiidka 777 gawaarida xamuulka qaada iyo 998 xamuullayaal oo ka socda Tema ilaa goobta laga soo qodayo; Xoojinta dhuumaha iyo marinada isgoysyada wadada dheer, Qiimeynta iyo dayactirka wadada udhaxeysa dhagaxa iyo goobta shaqada; Baadhista carrada wadada iyo hareeraha godka amaahda; Ka saarista culeys badan goobta dhagaxa laga soo qoro si loogu diyaariyo dhagaxa macdanta; Kicinta keydinta iyo tas-hiilaadka dayactirka dheeriga ah ee laga qodayo qalabka bulshada. Howlgallada qodista iyo qarxinta ee dhagaxa laga qodayo waxay bilaaban doonaan bisha Luulyo iyo howgallada dhagaxa bisha Ogosto Dhagaxaanta dhagaxa ee dhismaha Groyne No. 4 ayaa bilaabmi doonta Nofeembar. -dhammaan
Waxaa laga soo qaatay sheekada daboolka ah ee Qodista Macdanta & Dhismaha Dunida
Ku Bilow Mashruuca Dib U Soo Celinta Xeebtaada Ellicott